Shiinaha oo maanta aduunka uga yaabsaday nooc cusub oo Nuclear ah+Sawirro – Bandhiga
Shiinaha oo maanta aduunka uga yaabsaday nooc cusub oo Nuclear ah+Sawirro
Shiinaha ayaa maanta soo bandhigtay nooc ama jiil cusub oo nuclear ka qaaradaha iskaga gudba ah Kuwaa oo awood u leh in ay kagudbaan difaacayada Mareykanka Iyo xulufadiisa ay gobolka soo dhigteen iyadoon ladareemin ama aanan waqti loo heli karin In isla waqti looga jawaabo hubkale oo nuclear ah.
Gawaari ay kurakibanyihiin nooca cusub ee gantaakadan DF-17 ayaa lagu soo bandhigay sanad guuradi 70 naad ee kasoo wareegatay aas aaska Jamhuurida Shacab weynaha ee China waxaana kasoo qeybgalay Madaxweynaha China Xi Jinping.
Tiknoolojiyada dabacsan ee looga hagi karo gawaarida xambaarsan gantaaladan DF-17 ayaa u ogolaanaya in ay joog aad uhooseeya oo aysan qaban karin raadaarada difaaca kuduulaan iyagoon ladareemin ama wax shanqar ah sameynin waxeyna leeyihiin muuqaal u eg afka hore ee diyaaradaha jet ka layiraahdo oo kale.
Waxaa sidoo kale lasoo bandhigay nooc labaad ee gantaalada qaaradaha iskaaga gudbo iyagana oo layiraahdo DF-41 Kuwa oo leh fogaan socod dhan 12,000 ilaa 15,000 oo kilometer waana Kuwa hada ugu fogaan socodka dheer aduunka oo dhan waxeyna awood u leeyihiin in ay dhulweynaha Mareykanka ku gaaraan 30 daqiiqo gudahood marka larido.
Noocyada kale ee lasoo bandhigay waxaa kamid ah JL-2 oo ah gantaalada ay gujisyada kasoo diraan badda hoosteeda Iyo Kuwa looga hortago gantaalada maraakiibta duulaanka ah ee YJ-18 sidoo kale Raadarro sheega diyaaradaha Iyo gantaalada weerarka ah awoodna uleh inay kahor tagaan duqeyn wadareed hal mar lagu soo wada qaaday China.
Dowladda China ayaa ciidankeeda oo ah 2M oo askar diyaarsan ah kuqarashgareysay $250bln sanad ki tagay ee 2018 taa oo kadhigeysa dalka labaad ee ciidankiisu ugu miisaaniyada weynyahay caalamka halka Dowlada aduunka ugu tunka weyn ee Mareykankana isla sanadkaas 2018 ay ciidankeeda oo iyagana ah 1.29M askar diyaarsan ah ku qarashgareysay $649bln oo ah kudhawaad sedex jibaar midka China.
Xafladan ayaa lagu casuumay 188 uqeybsane ee dhanka difaaca oo ka kala socday 97 Dal oo caalamka ah.